सबै द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न भारत तयार: सीमाविवादको बारेमा छलफल होला कि नहोला ? - TodayKhabar
सबै द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न भारत तयार: सीमाविवादको बारेमा छलफल होला कि नहोला ?
काठमाडौं, ११ मंसिर । आजबाट शुरु हुने विदेश सचिव हर्षबर्द्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको समयमा सीमा विवादलगायत सबै द्विपक्षीय विषयमा वार्ता गर्न भारत खुला रहेको एक उच्च भारतीय अधिकारीले बताएका छन् ।
दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतीय विदेश सचिव श्रृंगला बिहीबार काठमाडौं आउँदैछन् ।
ती अधिकारीले सीमाका सम्बन्धमा छलफल गर्न तयार रहेको तर यो विषयमा लामो गृहकार्य गर्नुपर्ने र राजनीतिक तहमा हल गर्नुपर्ने बताए । तर कुनै विषयमा कुरा गर्ने र नगर्ने भन्ने आफूहरुको अडान नरहेको र नेपालले उठाएका सबै विषयमा कुराकानी गर्न भारत तयार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘यी विषयमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर हामीले अहिले मुख्य फोकस गर्नुपर्ने विषय भनेका द्विपक्षीय विकास साझेदारी, कनेक्टिभिटी, व्यापारलगायत हुन् । यी विषयमा ठोस रुपमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
उनका अनुसार अहिले रहेका द्विपक्षीय विषयबाहेक विशेषत कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सहकार्य, भ्याक्सिनको विकासलगायतका क्षेत्रमा नेपालसँग भारत सहकार्य गर्न चाहन्छ ।
उनका अनुसार भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन भारतले चाहेको छ । उनी भन्छन्, ‘भारत नेपाललगायत छिमेकी मुलुकहरुलाई भ्याक्सिन खरिद मात्र होइन, अनुदानको रुपमा सहयोग गर्नका लागि समेत तयार छ ।’
नेपालसँग मात्र होइन, बंगलादेश, म्यानमार लगायतका अन्य मुलुकसँग कोभिड–१९ सम्बन्धी अनुसन्धान, तालिम र भ्याक्सिन उत्पादनलगायतका विषयमा भारतले सहकार्य गरिरहेको छ ।
ती भारतीय अधिकारीले पहिलेभन्दा पृथक यस पटक रोकिएका र अलमलमा परेका द्विपक्षीय विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस प्रारुप नै तयार पारिएको बताए । उनका अनुसार विदेश सचिव श्रृंगलाको भ्रमणपछि हुने संयुक्त कमिसनको बैठकमा यी विषयमा विस्तृतमा कुराकानी हुनेछ । अनलाइन खबरबाट
त्रिशूलीमा भ्यान दुर्घटनाः बेपत्तामध्ये दुईको शव फेला [अपडेट]